कालसर्प योग - विकिपिडिया
कालसर्प योग ज्योतिष शास्त्र अनुसार नराम्रो योग हो जसका कारण मानवले अरु असल योगहरुबाट पाउनु पर्ने राम्रा फलहरु पनि २५ प्रतिशतमात्र पाउने गर्छ । ज्योतिषमा राम्रा र नराम्रा गरी ४,०३५ वटा योग हरु हुन्छन्, त्यसमध्ये ६३ प्रतिशत राम्रा हुन्छन् भने ३७ प्रतिशत नराम्रा मानिन्छन् ।
२ वैज्ञानिक विचार
३ कालसर्पयोग परेका चर्चित व्यक्तित्वहरू
४ कालसर्पयोगका आधारभूत पक्षहरू
५ कालसर्प योगको प्रभाव
६ कालसर्पयोगको दोष नलाग्ने अवस्था
७ कालसर्प योगका किसिम
८ अनन्त कालसर्प योग
९ कुलिक काल सर्पयोग
१० वासुकी कालसर्प योग
११ शंखपाल कालसर्प योग
१२ पद्म कालसर्प योग
१३ महापद्म कालसर्प योग
१४ तक्षक कालसर्प योग
१५ कर्कोटक कालसर्प योग
१६ शङ्खचूड कालसर्प योग
१७ घातक कालसर्प योग
१८ विषधर कालसर्प योग
१९ शेषनाग कालसर्प योग
२० लग्नबमोजिम कालसर्प योगको फल
२१ समग्र उपाय
कालको अर्थ मृत्यु हो । शास्त्रमा सर्पलाई कालको पर्यायका रुपमा लिइएको पाइन्छ । काल स्वयं उत्पन्न भएको र यसलाई कसैले सृष्टि नगरेको पनि बताइन्छ र आदि, मध्य, अन्त्य र विनाशबाट रहित मानिन्छ । मनुष्यलगायत सम्पूर्ण चराचर जगतको मृत्यु कालका अधीनमा छ । काल सधैं गतिशील रहन्छ । यो कहिल्यै कसैका लागि पर्खँदैन । यसैले प्राणीलाई मृत्युका सम्मुख पुर्याउँछ । सर्पलाई पनि कालकै अङ्ग मानिएको छ । कालसर्प योग सम्भवतः समयको आन्तरिक गतिसँग जोडिएको त्यस्तो परिस्थिति हो, जसले व्यक्तिविशेषलाई अति नै कष्ट प्रदान गर्दछ अनि उसको जीवन स्वतः सङ्घर्षसँग गाँसिन पुग्छ ।
हामीले व्यवहारमा मान्दै आएका नवग्रहहरू मध्ये आकाशमा हेर्दा औंल्याउन नसकिने दुईवटा ग्रह: राहु र केतुलाई छायाँग्रह भन्ने गरेको पाइन्छ ।
नक्षत्रविज्ञानका अनुसार राहुको नक्षत्र भरणी र केतुको नक्षत्र अश्लेषा मानिदैं आएको छ भने नक्षत्रपतिको गणना गर्दा भरणीको देवता यमराज वा काल र अश्लेषाको देवता सर्प मानिएको छ । त्यसैले नक्षत्रका अधिदेवताका नाममा राहुलाई काल र केतुलाई सर्पका रूपमा उल्लेख गरेर राहु र केतुको संयुक्त नामका रूपमा यदाकदा कालसर्प पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा श्लोक उदाहरणीय छ –
कालसर्पयोगको उल्लेख धेरै प्राचीन ग्रन्थहरूमा भेटिएको छैन । यस प्रसङ्गमा राहुको आकार मुख र केतुको आकार पुच्छरका रूपमा विभाजित सर्पको जस्तो छ भनी कसैकसैले भनेका छन् भन्ने बराहमिहिरको लेखन विशेष स्मरणीय छ :-
मुखपुच्छविभक्ताङ्गं भुजङ्गमाकारमुपदिशन्त्यन्ये ।। 
कालसर्पयोग भन्ने नाम स्पष्ट उल्लेख नभए पनि प्रकारान्तरबाट बराहमिहिर, परासर, गर्ग आदिले सर्पयोगका विविध स्वरूपहरूका बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सारावली, मानसागरी, जातकतत्व, भृगुसूत्र लगायतका ग्रन्थहरूमा यसबारेमा पर्याप्त चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन् ।
वैज्ञानिक विचार[सम्पादन गर्ने]
राहु र केतु यी दुबै ग्रहलाई छायाँग्रह भन्ने गरिन्छ, किनभने आकाशमा यी दुबै ग्रहको भौतिक पिण्ड छैन। खगोलीय वृत्तमा जुन ठाउँमा सूर्य र चन्द्रमाको भ्रमणपथको काल्पनिक रेखाको मिलन हुन्छ, त्यस बिन्दुविशेषलाई राहु र केतु छायाँग्रह मानिन्छ। सूर्यादि ग्रहहरू आआफ्ना भ्रमणपथमा भिन्नभिन्न गतिले भ्रमण गर्ने हुनाले पृथ्वीमा बसेर अवलोकन गर्नेहरूले सबै जसो ग्रहहरू एउटै अर्द्धवृत्तमा वा १८०˚ भित्र देख्ने परिस्थिति पनि समयसमयमा आइपुग्दछ । हामीले मान्दै आएका सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिलाई एउटै निश्चित बिन्दुबाट १८०˚ वा अद्र्धवृत्त भित्रै देखिने यस्तो विशेष अवस्था दुर्लभ नै हुन्छ । अझ छायाँग्रहका रूपमा मानिएका दुई विन्दुहरू राहु र केतुको बीचमा माथि उल्लेखित सातै ग्रहहरू एकत्रित हुनु त झनै दुर्लभ हुन्छ । यही राहु र केतुको बीचमा सबै ग्रहहरू रहेको देखिने दुर्लभ परिस्थिति ­विशेषलाई नै वास्तवमा कालसर्पयोग भन्ने गरिन्छ । सामान्यत: कालसर्पयोगको अवस्थालाई ज्यौतिषमा दुर्लभ र व्यवहारमा दुःखद मान्ने गरिन्छ ।
तपाईंको चिनामा सबै ग्रहलाई तपाईंको जन्मसमय, जन्मस्थान र त्यस समयको ग्रहगोचरको वृत्त संरचना गरी हेर्दा एउटा अर्द्धवृत्तभित्र सबै ग्रह पर्नु र त्यस अर्द्धवृत्तको प्रारम्भ विन्दु र अन्तिम विन्दुमा राहु (छायाग्रह) वा केतु(छायाग्रह) रहेको स्थिति नै कालसर्प योग हो । अर्को शब्दमा जब चिनामा भएका सबै ग्रहहरु राहु र केतु को बिचमा हुन्छन् अनि काल सर्प योग लाग्ने हुन्छ । मूलत: राहु-केतु भौतिक ग्रह नभएर आध्यात्मिक ग्रह हुन्। अत: यी दुबै ग्रहका सम्बन्धमा विशेष अध्ययन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। वास्तवमा राहु र केतु दुबै ग्रहको हाम्रो कर्मगत फलसँग अति गहिरो सम्बन्ध छ। यी ग्रह जीवनका सूक्ष्मतम बिन्दुसँग असाध्यै नजिक छन्। यी दुबैको सोझो सम्बन्ध हाम्रो चेतनासित छ। त्यसैले राहु र केतु यी दुईवटै ग्रह आफ्नो प्रभाव देखाउन शीघ्रता गर्दछन्।
कालसर्पयोग परेका चर्चित व्यक्तित्वहरू[सम्पादन गर्ने]
चर्चित व्यक्तिहरू	किसिम
गौतमबुद्ध (आंशिक,	पृष्ठोदय,	धर्मप्रवर्तक)
पृथ्वीनारायण शाह (आंशिक,	मुखोदय,	आधुनिक नेपालका प्रथम राजा)
राजा प्रताप मल्ल (आंशिक,	मुखोदय,	कान्तिपुरका राजा)
राजमाता योगमती	(आंशिक,	मुखोदय,	ललितपुरकी शासक, राजमाता)
बहादुर शाह (आंशिक,	मुखोदय,	नेपालका नायब, राजकुमार)
चन्द्र शम्सेर (आंशिक,	मुखोदय,	नेपालका प्रधानमन्त्री)
फत्येजङ्ग शाह	(आंशिक,	मुखोदय,	नेपालका चौतरिया)
महात्मा गान्धी	(आंशिक,	पृष्ठोदय,	भारतीय राष्ट्रपिता)
डा. शङ्करदयाल शर्मा	(आंशिक,	मुखोदय,	भारतीय राष्ट्रपति)
अब्राहम लिङ्कन	(पूर्ण,	मुखोदय,	अमेरीकी राष्ट्रपति)
मुसोलिनी	(पूर्ण,	मुखोदय,	इटालीका राष्ट्रपति)
जवाहरलाल नेहरू	(पूर्ण,	पृष्ठोदय,	भारतीय प्रधानमन्त्री)
अटलबिहारी बाजपेयी	(आंशिक,	पृष्ठोदय,	भारतीय प्रधानमन्त्री)
राजीव गान्धी	(आंशिक,	पृष्ठोदय,	भारतीय प्रधानमन्त्री)
पी. वी. नरसिंह राव	(आंशिक,	मुखोदय,	भारतीय प्रधानमन्त्री)
टी. एन. शेषन	(आंशिक,	मुखोदय,	भारतीय निर्वाचन आयुक्त)
शत्रुघन सिन्हा	(आंशिक,	पृष्ठोदय,	भारतीय सिने कलाकार)
अनील कपुर	(पूर्ण,	पृष्ठोदय,	भारतीय सिने कलाकार)
मार्भन आटापट्टु	(आंशिक,	मुखोदय,	अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी(श्रीलङ्काली))
लारा दत्ता	(पूर्ण,	मुखोदय,	विख्यात विश्वसुन्दरी
नेल्सन मन्डेला (दक्षिण अफ़्रिकि रास्ट्रपति )
कालसर्पयोगका आधारभूत पक्षहरू[सम्पादन गर्ने]
वर्तमान समयमा कालसर्पयोगलाई अत्यन्त संयोगका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइएको छ, जसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । वास्तवमा कालसर्पयोगलाई ग्रहभ्रमणका क्रममा हुने एउटा गतिपरक योगका रूपमा लिई सोको समसामयिक विश्लेषण गरी उपचार गर्नु उचित हुन्छ ।
	यदि सबै ग्रहहरू वा केही ग्रहहरू राहु वा केतुका साथमा रहेको भएमा पनि अंशात्मक रूपमा राहु र केतुको बीचमा सबै ग्रहहरू परेकै हुनुपर्दछ ।
	राहुबाट आठौंमा शनि परेमा पनि कालसर्पयोगको फल लागू हुन्छ ।
	चन्द्रमाबाट आठौं राहु वा केतु परेमा पनि यस्तै फल प्राप्त हुन्छ ।
कालसर्प योगको प्रभाव[सम्पादन गर्ने]
मुख्यत: जन्मकुण्डलीमा यी दुबै छाया ग्रहको उपस्थितिका आधारमा जातकको आंतरिक स्वभाव थाहा पाउन सकिन्छ। जसअनुसार जातकले आफ्नो जीवनलाई गतिमान तुल्याउन सक्दछ । यी दुबै छाया ग्रहको स्पष्ट व्याख्याबाट व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइको पूर्वानुमान गरेर ती कष्टहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ। तर यी दुबै छाया ग्रहका बारेमा एउटा के कुरो सत्य हो भने यी दुबै छाया ग्रहद्वारा जीवनमा जेजस्ता अनिष्टकारी घटनाहरू हुने गर्दछन्, तिनले जातकलाई आध्यात्मतर्फ अग्रसर बनाउँदछन् । केतु शब्दले ध्वजा अर्थ पनि प्रदान गर्दछ। तर ध्वजाको पताका वा झण्डा होइन। केतुलाई ध्वजा भन्नुको के अर्थ हो भने केतु परमात्माको शक्तिको मूर्त रूप हो। जसको प्रभाव र चेतनाबाट मनुष्यले यस सृष्टिमा व्याप्त त्यस सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी शक्तिको अनुभव गर्न सक्दछ। जातकको जन्मकुण्डलीमा अन्य ग्रह बलवान् छैनन् भने यस योगमा जन्मने व्यक्ति अल्पायु पनि हुने गर्दछन्, जीवित नै रहे पनि उसले पटकपटक मृत्युतुल्य कष्ट व्यहोर्नु पर्छ । यस योगले प्राणिलाई किसिमकिसिमले दीनहीन तुल्याउँदछ । यस्ता व्यक्तिले अनेकखाले कष्ट र तनाव भोग्नुपर्छ । त्यसैले ज्योतिषशास्त्रमा यस योगलाई अशुभ फलसूचक योगका रूपमा लिइन्छ ।
कालसर्पयोगको नकारात्मक प्रभाव
	विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यसमस्याहरू,
	अपाङ्गस्थिति (शारीरिक रूपमा ),
	सुस्तमनस्थिति ( मानसिक कमजोरी समेत ),
	सन्ततिसम्बन्धी समस्याहरू (पाँचौ राहुले सन्तानसुखबाट वञ्चित गर्छ ),
	पतिपत्नी विवाद,
	फलप्राप्तिमा अवरोध,
	बाह्रौं राहुले ऋण, प्रवास र चिन्ता पनि बढाउँछ,
	आठौं राहुले रोग, दुर्घटना, प्रवास वा बन्धन बढाँउछ,
	नवौं राहुले करोडपतिबाट कङ्गाल पनि बनाउँछ।
	दशौं राहुले शासकबाट जेलबन्धन दिलाउँछ,
	लग्नको राहुले रोगी बनाउँछ,
	चौथो राहुले शरीरको मध्यभागमा अवरोध गराउँछ र
	सातौं राहुले वैधव्य ( विधवा वा विधुरमा पारिवारिक विखण्डन गराउँछ )।
कालसर्पयोगको दोष नलाग्ने अवस्था[सम्पादन गर्ने]
	पति वा पत्नी ज्येष्ठा, मूल र अश्लेषा नक्षत्रमा जन्मेको अवस्थामा
	कुण्डलीमा राशि परिवर्तन योग भएमा ( वृश्चिक लग्नको ट र ड मा बाहेक अन्य अवस्थामा ),
	सबै ग्रह सप्तमस्थानदेखि प्रथमस्थानसम्म रही शुभफलदायक छत्रयोग बनाएमा
	सबै ग्रह प्रथमस्थानदेखि सप्तमस्थानसम्म रही शुभफलदायक नौका योग बनाएमा
	सबै ग्रह चतुर्थस्थानदेखि दशमस्थानसम्म रही शुभफलदायक कुटयोग बनाएमा
	सबै ग्रह दशमस्थानदेखि चतुर्थस्थानसम्म रही शुभफलदायक सर्पयोग बनाएमा
	राहु ३, ६, १०, ११ राशिमा भएमा पनि कालसर्पयोगको दोष लाग्दैन । परन्तु त्यस्तो दोषरहित राहुको स्थितिबाट विशेष शुभफल मिल्न जान्छ ।
कालसर्प योगका किसिम[सम्पादन गर्ने]
वास्तविक कालसर्पयोगको प्रसङ्ग माथि नै चर्चा भइसकेको छ । तापनि राहु र केतुको घेरा बाहिर एउटासम्म ग्रह भएको अवस्थामा पनि व्यक्तिलाई व्यवहारमा आंशिक असर पर्न जाने पक्षलाई मध्यनजर राखी पूर्ण कालसर्पयोग र आंशिक कालसर्पयोग भनेर वर्गीकरण गर्ने जनधारणा रही आएको छ । यस आधारमा पूर्ण र आंशिक कालसर्पयोगका विविध भेद भनेर घद्धछट किसिमका कालसर्पयोगको अवधारणा ज्योतिषीहरूले अघि सारेका छन् । यस मान्यताअनुसार १२ भावगत र १२ राशिबाट १४४, उदित र अनुदित भेदले २८८ र ती हरेकमा एक­एक भावमा एक­एक ग्रह राहु र केतुको घेराबाहिर पर्दा बन्ने आंशिक योगको भेदसहित गणना गर्दा ३४५६ प्रकारका हुने देखिन्छ तर पनि निम्नलिखित १२ योगलाई विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ती हुन् :-
अनन्त -	स्वास्थ्यकष्ट र दुःखद पारिवारिक स्थिति
कुलिक - दुःखद आर्थिक स्थिति, वाक्युद्ध
वासुकी -	उच्च आर्थिक र सामाजिक उन्नति
शंखपाल -	प्रभावशाली व्यक्तित्व तर निराश दिनचर्या
पद्म -	तेज दिमाग र धनलाभ तर सन्तानपीडा
महापद्म -	धन, मान र प्रतिष्ठावृद्धि तर यदाकदा स्वास्थ्यबाधा
तक्षक -	यात्रा र व्यापारमा वृद्धि, तर वैवाहिक कष्ट र दुर्घटना
कर्कोटक -	स्थान परिवर्तन योग तर जेल र अङ्गभङ्गको पनि भय
शंखचूड -	भाग्यवृद्धि तर धर्मनाश र आकस्मिक वैराग्ययोग
घातक -	कर्मवृद्धि र पदप्रतिष्ठा प्राप्ति तर पितृनाश
विषधर -	सामाजिक सम्मान र धनवृद्धि तर आंशिक पुत्रबाधा
शेषनाग -	धनक्षय, जेलबन्धन र अङ्गभङ्गको भय एवं स्थाननाश
यसरी संलग्न विवरण हेर्दा सामान्यतया ३, ६, ९, १०, ११ औं स्थानमा राहु बसेर बनाएको कालसर्पयोगको फल सुखद र सकारात्मक हुने गरेको पाइएको छ । यी समस्त कालसर्प योगहरू मध्ये कर्कोटक, विषधर, घातक र शंखचूड सबैभन्दा बढी दुष्प्रभावी हुन्छन् । बाँकी कालसर्प योग त्यति हानिकारक हुँदैनन् । तिनको पूजनपाठ, स्वस्तिशान्ति गराउनाले शांत हुन्छन् । कालसर्प दोषले जसलाई आक्रान्त तुल्याएको हुन्छ, त्यो व्यक्ति प्रायशः असमंजसयुक्त वातावरणमा हुने गर्दछ र कुनै काम पनि ठीक तरिकाले गर्न सक्दैन, ऊ सधैंजसो भयग्रस्त रहन्छ वा उद्दण्डतारत हुन्छ ।
अनन्त कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
राहु लग्नमा र केतु सप्तमभावमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा अनन्त नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ । यस कालसर्प योगको प्रभावले जातक धनवान्, बलवान्, बुद्विमान् र अध्यात्मवेत्ता हुने गर्दछ, साथै अतीव दृढ निश्चयी र साहसीसमेत हुन्छ। त्यस जातकले आफ्नो पुरुषार्थमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्दछ। तर त्यस व्यक्तिको पति वा पत्नीको स्वास्थ्यमा प्रायशः प्रतिकूलता देखिन्छ। सन्तान विशेषतः पुत्रसन्ततिसित सम्बन्ध अनुकुल हुँदैन। जातक मानसिक अशान्ति र अस्थिरताको प्रवृत्तिले ग्रसित हुन्छ । ऊ दुष्टबुद्धि, मिथ्याभाषी र लम्पट हुन्छ । ऊ षडयन्त्रमा फँसिरहन्छ । अड्डाअदालतका कारण प्रशस्त हानि ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो कार्यक्षमता बमोजिम वाञ्छित सफलता प्राप्ति हुँदैन । आफूले गरेको परिश्रमको फल पनि पराइले प्राप्त गर्दछन । धर्म र र्इश्वरप्रतिको विश्वास क्रमश: हटदै जान्छ । आफूलाई समाजमा स्थापित तुल्याउन असाध्यै मिहिनेत गर्नुपर्छ । उसको वैवाहिक जीवन पनि प्राय: कष्टप्रद हुन्छ । उसले स्वास्थ्यसम्बद्ध विविध समस्या त ब्यहोर्नु नै पर्छ साथै उसको पारिवारिक स्थिति पनि दु:खद हुन पुग्छ।
प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप वा भगवान शिवमा श्रद्धाभक्ति र ॐ नम: शिवाय मन्त्रको प्रतिदिन जाप वा नागपञ्चमीका दिन प्रतिवर्ष व्रत गर्ने, यथोचित दानदक्षिणा गर्ने र नागलाई दूध चढाउने वा कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने। सूर्योदयपछि तामाको कुनै एउटा पात्रमा गहुँ र सक्खर(गुड)मिश्रित अन्न झुसी हुनेगरी भरेर बग्दो पानीको प्रवाहमा कम्तीमा सातवटा शनिबार बिसर्जन गर्नुपर्दछ। अन्तिम शनिबारका दिन रुद्राभिषेक गरी उक्त भाँडो र कालो राडी(कम्बल) ब्राह्मण वा दीनदुःखीलाई दान गर्नुपर्दछ। प्रतिदिन एक माला ॐ नम: शिवाय यस मंत्रको स्वयं आफैले वा ब्राह्मणद्वारा जप गर्नुपर्दछ। अथवा कालसर्पदोष निवारक यन्त्र घरमा स्थापित गरी त्यसको नियमित पूजन गर्नुपर्दछ।
कुलिक काल सर्पयोग[सम्पादन गर्ने]
राहु दोस्रो स्थानमा र केतु अष्टमभावमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा कुलिक नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ । यस भावमा बसेर राहुले सदैव जातकलाई दहीचिउरे स्वभावको बनाइदिन्छ। अत्यधिक आत्मविश्वासका कारण अनेक प्रकारका मानसिक असन्तोष र तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना प्रियजनको विरहव्यथा भोग्नुपर्छ। केतु आठौं भावमा रहेका कारण कतिपय जातक पायल्सका रोगी हुने गर्दछन्। तर आठौं घरको केतु मेष, वृष, मिथुन, कन्या र वृश्चिक राशीमा अवस्थित छ भने जातकसँग धनको कमी हुँदैन। यस्ता व्यक्तिले पुस्तान्तरबाट प्राप्त पुर्ख्यौली सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउँछन्। जातकलाई प्रारमिभक शिक्षादीक्षामा कठिनाइ हुन्छ । आँखा र मुखसित सम्गद्ध रोगले सताउँछ । जीवन र परिवार धान्न लिएको ऋणले गर्दा आर्थकि अवस्था दयनीय हुन पुग्छ । अन्य शुभयोगका बलले राम्रै सामाजिक र आर्थकि स्थिति भइहाले पनि ऊ मानसिक रूपले तनावग्रस्त रहने गर्छ । त्यो तनावको प्रभाव उसको व्यक्त्गित नातागोता माता-पिता, पत्नी, पुत्रादिमा स्पष्टत: देखनिछ । उसले आफन्तलाई त्याग्न पनि सक्छ । दु:खद आर्थकि स्थिति त हुन्छ नै, उसले झगडा र मुद्दामामिला पनि खेप्नु पर्छ।
चाँदीको दाना बनाएर सेतो धागोमा बाँधेर हरहमेशा घाँटीमा धारण गर्नुपर्दछ। केसरीको तिलक लगाउने गर्दा पनि यस्ता जातकलाई शुभ नै हुन्छ। २१ वटा आइतबारसम्म बग्दो पानीमा आफ्नो श्रद्वानुसार काठका कोइला प्रवाहित गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गर्ने वा राहु र केतुको मन्त्रलाई प्रतिदिन पाठ गर्ने तथा दुबै ग्रहको दानादि गर्ने वा आफ्नो लग्न-अनुकूल हुने गरी रत्न धारण गर्ने वा प्रतिवर्ष नागपञ्चमीका दिन व्रत गर्ने र पूजा लगाउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
वासुकी कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
राहु तेस्रो स्थानमा र केतु नवमभावमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा वासुकी नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जातकसँग धनदौलथ र वैभवको कुनै कमी हुँदैन। उसका अनुकूलमा सुख हुन्छ तथा मित्रशक्तिबाट पनि यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुन्छ। पितासित पनि अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ र पिताको आज्ञाकारी पुत्रमा उदाहरणलायक हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले धर्म र अध्यात्मका माध्यमले धनार्जन गर्दछन्, प्रसिद्धि प्राप्त गर्दछन् र देशदेशान्तरमा समेत यश प्राप्त गर्दछन्। तर यस्तो जातकको आफूभन्दा कान्छा भाइ जीवित रहँदैनन् वा जीवितै रहे पनि ती दुईको एकआपसमा ठूलो शत्रुता हुन्छ। जातकले आफ्ना परिवारजन र खासगरी भाइ र बहिनीसित सम्बद्ध समस्याले सताउने देखनिछ । आफ्ना साथीभाइ र नातागोताले विश्वासघात गर्नाले धोका पाइने छ । साहस, धैर्य र पराक्रममा कमी आउनाले जीवन नैराश्य पूर्ण देखनिछ । वैदेशिक यात्रा भइ गए पनि प्रवासमा अनेकानेक कष्ट ब्यहोर्नु पर्छ । कानुनी कागजात वा लेखापढीमा ध्यान नदिनाले उसले हानि ब्यहोर्नु पर्छ । यी अनिष्टता देखिए पनि उसको आर्थिक र सामाजिक स्थिति उन्नत हुन्छ।
चामल, दाल र चना एउटा पात्रमा राखी कम्तीमा सातवटा बुधबार बग्दो पानीमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ। घरको मुख्य द्वारमा भित्रबाहिर दुबैतिर स्वस्तिक वा गणेशजीको प्रतिमा टाँस्नुपर्छ। ७२ वटा बुधबारसम्म प्रत्येक बुधबारका दिन काला खाद्यपदार्थ र वस्तुहरू श्रद्वानुसार कालै वस्त्रमा बाँधेर राहुको मन्त्र जप गर्दै गरीब वा ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ। दान लिन कसैले नमानेमा त्यस पोकोलाई बग्दो पानीमा बगाइदिनु पर्छ। राहु, केतु र सङ्कटाको दशा वा अंतर्दशामा महामृत्युञ्जय मंत्रको नियमित जाप गर्नुपर्छ वा ब्राह्मणद्वारा गराउनु पर्छ। नागपञ्चमीका दिन प्रतिवर्ष व्रत गर्ने, यथोचित दानदक्षिणा गर्ने र नागलाई दूध चढाउने वा मृत पितृहरूको यथोचित तीर्थश्राद्ध सम्पन्न गर्ने वा ११ दाना जटासहितका नरिवल शनिवारका दिन वा नागपञ्चमीका दिन बग्दो पानीमा बगाइदिने वा चराचुरुङ्गीलाई प्रतिदिन चारो दिने वा बग्दो पानीमा ११२५ ग्राम गँहु वा जौ बगाउने। विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
शंखपाल कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
राहु चौथो स्थानमा र केतु दशमभावमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा शङ्खपाल नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ । जातकको व्यक्त्तित्व प्रभावशाली हुन्छ, तर उसको दिनचर्या भने नैराश्यपूर्ण हुन्छ । आमाको ममता तथा स्नेहप्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । आमा जीवित नै रहेको अवस्थामा आमाका माध्यमबाट हानि ब्यहोर्नु पर्छ । उसले शिक्षाग्रहण गर्ने प्रसङ्गमा पनि प्रशस्त झमेला खेप्नु पर्छ । चलअचल सम्पत्तिबारेमा पनि कष्ट भोग्नुपर्छ । वाहन दुर्घटनाका प्रशस्त सम्भावनाहरू हुन्छन । जग्गाजमिनमा पनि किचोला भइरहन्छ । सामाजिक सेवाका प्रसङ्गमा विना कारण अपयशको भागी बन्नु पर्छ । कुनै कार्यारम्भ गर्नु अघि नै उसलाई अनावश्यक भ्रम र शङ्काले ग्रस्त बनाउँछ । अत: जातकको जीवन घोर निराशापूर्ण र सङ्घर्षमय भएर बित्छ। यस्तो कालसर्प योग हुने जातकले राहु उच्चगृहको र शुभराशीको भए समस्त सुखभोग गर्न सक्दछ एवं जातकको कुण्डलीमा शुक्र अनुकूल भएमा विवाहपछि कारोबार र धनधान्यमा वृद्धि प्राप्त हुन्छ। साथै यदि चंद्रमा लग्नमा भए आर्थिक तानावको सामना गर्नुपर्दैन। यो योग हुने व्यक्तिले ४८ वर्षको उमेरमा बृहस्पतिग्रहको उत्तम फल प्राप्त गर्दछ। यद्यपि सफलताका निम्ति उसले विघ्नको सामना गर्नु पर्दछ । उता केतु दसौं घरमा मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशिमा हुँदासमेत उत्तम फल प्राप्त हुन्छ एवं उसलाई शत्रुले प्रयत्न गरेर पनि हानि पुर्याउन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिले राजनीतिमा उतारचढाव हुँदाहुँदै राम्रो सफलता प्राप्त गर्दछन्। अनि यस्ता व्यक्तिले आफ्ना साथीभाईबाट नचाँहदा नचाँहदै पनि सहयोग प्राप्त गर्दछन्।
प्रत्येक आइतबार पहेंलो कपडामा गहूँ बाँधेर खाँचोको अनुभव भएका व्यक्तिलाई दान दिनुपर्दछ। आइतबारका दिन ४०० ग्राम धनिया बग्दो पानीमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ। शिवलिङ्गको अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्ने वा चाँदीको सर्प बनाएर शिवजीलाई चढाउने वा राहु ग्रहको मन्त्र प्रतिदिन पाठ गर्ने वा धातुबाट निर्मित १०८ वटा राहुयन्त्र नागपञ्चमीका दिन बग्दो पानीमा बगाउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
पद्म कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
राहु पाँचौ घरमा र केतु एघारौं घरमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा पद्म नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ। जातकको दिमाग तेजिलो हुन्छ । तर उसले उच्चस्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैन । जातकले प्रशस्त धनसम्पत्ति कमाउने योग पनि छ, यधपि त्यो धन शत्रुमार्फत नष्ट हुन्छ । उन गरियो कित सन्तान हुँदैनन वा पुत्रसन्तानको अभाव हुन्छ । अथवा भएका सन्तति रोगी, अपाङ्ग र बेकामे हुन्छन् । उनलाई बुढ्यौली एकाकी बित्छ। यस्ता व्यक्तिहरुलाई उदर (पेट)को रोगको सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। पञ्चम भावको राहु तथा एघारौं भावको केतुले जातकलाई अध्यात्मपट्टि प्रेरित गर्दछ। उत्तम परिवार भएको, आर्थिक स्थिति मजबूत भएको तथा उत्तम गुण एवं भोगबाट युक्त हुन्छ। केतुले एघारौं घरमा सम्पूर्ण सिद्धि तथा सफलता प्राप्त गराउँदछ तर यस योगमा संतान पक्षमा थोरै कमजोरी रहन सक्दछ। साथै जातक आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति प्रियकर नहुन सक्छ। २१ वा ४२ वर्षको उमेरमा जातकको पितालाई कष्टको सम्भावना रहन्छ। यस्ता व्यक्ति सफल राजनितिक हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुलाई उतारचढाव त भैरहन्छ तर सफलता र राम्रो यश प्राप्त हुन्छ। धेरजसो ठूला राजनितिज्ञहरूमा यो कालसर्प योग प्राप्त हुन्छ। पञ्चमभावलाई पूर्वजन्मसँग सम्बन्धित मानिन्छ।
राती सुत्ने बेलामा सिरानेमुनि पाँचवटा मूला राखेर बिहानै भगवान् शिवको मंदिरमा अर्पण गर्नुपर्दछ। सन्तान सुखको कामना हुनेले मूल दैलोको ठेलोलाई चाँदीको पत्रले मोड्नुपर्दछ। कुनै शुभ मुहूर्तमा एकाक्षी नरिवल आफ्नो शिरदेखि पैतालासम्म सातपल्ट आरती गरे झैं घुमाएर सातवटा बुधवारसम्म गङ्गा वा जमुना नदीमा अथवा गङ्गागामिनी नदीमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ। ४० दिनसम्म पंक्षीलाई जौका दानाको चारो खुवाउनु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गर्ने वा आफूभन्दा पाका उमेरका व्यक्तिलाई सम्मान र आदर भाव राख्ने वा ज्ञानप्राप्ति गर्ने सिलसिलामा आफूभन्दा कान्छै भएपनि उसबाट श्रद्धाभक्त्पिूर्वक करबद्ध भर्इ ग्रहण गनुपर्छ वा घरमा मुजुरको प्वाँख राख्ने वा प्रतिदिन सर्पसूक्तको जाप गर्ने।विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
महापद्म कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
राहु छैठौं घरमा र केतु बाह्रौं घरमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा महापद्म नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ। छैटौं स्थानको राहुले धेरै सहयोग गर्दछ र राम्रो फल प्रदान गर्दछ, यहाँसम्म कि मृत्युको मुखबाट पनि खोसेर ल्याउने काम राहुले गर्दछ। सम्पत्ति, वाहन, दीर्घायु, सर्वत्र विजय, साहस, बहादुरी आदि राहुको प्रभावबाट प्राप्त हुन्छ। यस योगका जातक धर्म र अध्यामसँग जोडिएका हुन्छन्। सबै प्रकारको प्रतिस्पर्धामा राम्रो सफलता पाउँदछन् तथा दान, पुण्य र अरुको मदद गर्न आफ्नो सबै धनसम्पत्ति लुटिएको पनि थाहा पाउँदैनन्। तर जातक प्राय: रोग र ऋणबाट ग्रस्त हुन्छ । दुर्व्यसनी हुन्छ । आँखाको बिमारीले पनि सताउँछ। चारित्रिक दोष पनि देखिन्छ। मामालाई पनि कष्ट हुन्छ । व्यवसायमा हानि हुन्छ । यद्यपि उसले सबै समस्याहरू झेल्दै धन, मान र प्रतिष्ठा त कमाउँछ तर खराब स्वास्थ्य सहितको बुढ्यौलीले उनलाई जीवनलाई निराशामय बनाइदिन्छ। आफू कहिल्यै निरोगी हुँदैन। अनेक किसिमका रोगले सताउँछ। जुवा, तास, सट्टापट्टा वा चिट्ठाको दुर्व्यसनले यस्ता व्यक्तिलाई यस योगले बर्बाद तुल्याउन सक्छ।
यस्तो कालसर्पयोग हुने जातकका लागि गणेशजीको उपासना सर्वमङ्गलकारी मानिन्छ। शुक्ल पक्षको पहिलो शनिबारबाट थालनी गरी कम्तीमा १८ पटक शनिबारको व्रत लिनु पर्दछ। कालो वस्त्र धारण गरेर १८ माला राहु बीजमन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। तदनन्तर एउटा भाँडोमा दूर्वा र कुश मिश्रित पानी पिपलको जरामा चढाउनु पर्छ। गुलियो खाद्यपदार्थ जस्तै गुलियो सातु, रोटी, कुराउनी, भुजाको लड्डु, तिल र सक्खरको लड्डु आदिले हवन गर्नुपर्छ र यिनै सामग्री जुटाएर गरिबगुरुबा वा ब्राह्मणलाई दान पनि गर्नुपर्छ। राती घिउको दियो बालेर पिपलको रुखको फेदमा राखिदिनु पर्छ। अन्भय्गा उप्वाआय्नाहरूमा श्रीकृष्णको पूजाआजा गर्ने वा लगातार १६ वटा औंसीमा आफ्ना मृत पितृको मोक्षार्थ यथोचित श्राद्ध सम्पन्न गर्ने वा नागपञ्चमीका दिन प्रतिवर्ष व्रत गर्ने, यथोचित दानदक्षिणा गर्ने र नागलाई दूध चढाउने वा शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्ने वा बग्दो पानीमा ११२५ ग्राम गँहु वा जौ बगाउने वा घरको मूल दैलोमा विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा गर्न लगार्इ स्वसितक यन्त्र झुन्ड्याउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने। मंगलवार एवं शनिवारका दिन रामायणको सुन्दरकाण्डको १०८ पल्ट पाठ श्रद्धापूर्वक गर्नुहोस्।
तक्षक कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु लग्नमा र राहु सप्तमभावमा बसेर यी दुबैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा तक्षक नामक कालसर्प योगको रचना हुन्छ । यस योगमा जन्मने जातकका लागि लामो टाडाको यात्रा प्राय: कष्टप्रद हुन्छ । साझेदार भई गरेको व्यापार व्यवसायमा हानि ब्यहोर्नु पर्छ । विश्वासी र भरपर्दो साथीले पनि एकाएक शत्रुवत् व्यवहार गर्न थाल्छ । उसको प्रगतिको मार्ग अवरुद्ध हुनपुग्छ । यद्यपि उसले सबै समस्याहरू झेल्दै यात्रा, व्यापार र व्यवसाय बढाउँछ तर जातकको वैवाहिक जीवन समस्यामूलक हुन्छ र उसमा वैराग्यका भावनाहरू सञ्चरण हुन थाल्छन्। जातकले उच्च सरकारी पदमा बसी काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्दछ। सुखी, परिश्रमी र धनी हुन्छ। उसले आफ्ना पितालाई धेरै नै आदर, सम्मान र प्रेम गर्दछ साथै सहयोगी पनि हुन्छ। धनधान्य र सुखसम्पत्तिको कुनै कमी हुँदैन। यति हुँदाहुँदै जातकले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हन्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। आफ्नो सङ्गतमा राम्रा मानिसहरू भएमा राम्रो नै हुनसक्छ तर खराब सङ्गतका कारणले विशेषतः कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। यदि जातकले खासगरी परोपकारमा चित्त लगाएमा यी कुलक्षणहरू नदेखिन सक्छन्।
सातवटा आइतबारसम्म प्रत्येक आइतबार ११ वटा नरिवल बग्दो पानीमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ। दिनहुँ हनुमान् चालिसाको ११ पल्ट पाठ गर्नुपर्दछ र हरेक शनिवारका दिन रातो कपडामा आठ मुट्ठी भिजेका चना तथा ११ वटा केरा अगाडि राखेर हनुमान चालिसाको १०८ पल्ट पाठ गर्नुपर्दछ र ती केरा बाँदरलाई खुवाउनुपर्छ र प्रत्येक मंगलवारका दिन हनुमान् मन्दिरमा बुनियाको लड्डूको भोग लगाएर हनुमानको प्रतिमामा चमेलीको तेल दलिदिनु पर्दछ। कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा ११२५ ग्राम जौ वा धातुबाट निर्मित १०८ वटा राहुयन्त्र नागपञ्चमीका दिन बग्दो पानीमा बगाउने वा शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्ने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
कर्कोटक कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु दोस्रो भावमा र राहु अष्टम भावमा रहेर ती दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भए कर्कोटक नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। यस योगमा जन्म लिने जातक उदारमना, समाजसेवी र धनवान् हुन्छ। तर वाणीमा संयम हुँदैन। शिक्षामा समस्या आउँछ। परिवारमा कलह हुन्छ। साथै जातकले सधैं निन्दाको पात्र हुनुपर्छ। जातकलाई भाग्यले साथ दिदैन। नोकरी वा व्यवसायमा स्थिरता हुँदैन । घटुवा र असफलता भइरहन्छ । पैतृक सम्पत्ति र कुलको इज्जतमा हानि पुग्छ । साथीहरूबाट छलप्रपञ्च र जालसाजी हुन्छ । अकस्मात् शस्त्रप्रहार वा विषपानद्वारा मृत्यु पनि हुनसक्छ । उसले दुर्गमस्थानमा बसाइँ सर्नुपर्ने वा सरुवा भई जानुपर्ने हुन्छ । राज्यपक्षबाट अनावश्यक दु:ख पाउने र बन्धनको स्थिति पनि आउँछ । त्यस्तै चोटपटकबाट अङ्गभङ्गको भय पनि हुन्छ ।
चांदीको चारकुने टुक्रो बनाएर हरहमेशा आफ्नो गोजीमा राख्नुपर्छ। शुभ मुहूर्तमा बग्दो पानीमा मुसुरोको दाल सातपल्ट प्रवाहित गर्नुपर्छ र त्यसपछि लगातार पाँचवटा मङ्गलबारका दिन हनुमानको प्रतिमामा चमेलीको तेल घसिदिनु पर्छ,हनुमानलाई बुनियाको लड्डू अर्पण गरेर प्रसाद वितरण गर्नुपर्छ। अन्तिम मङ्गलबार गुलिया खाद्यपदार्थहरू र मिठाई सवा किलोको परिमाणमा हनुमानलाई अर्पण गरेर प्रसादका रूपमा वितरण गर्नुपर्छ। ४१ दिनसम्म जौका दानालाई चाराका रूपमा खुवाउनु पर्छ र प्रत्येक शनिवारका दिन कमिलालाई चाराका रूपमा सक्खर मिश्रित सातु तिनको प्वाल खोजीखोजी अर्पण गर्नुपर्छ। असली रुद्राक्षको माला बनाएर धारण गर्ने वा शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्ने वा राहु र केतुसँग सम्बन्धित दानादि सङ्कलन गरी ब्राह्मणलाई दान गर्ने वा गरिबगुरुवालाई प्रदान गर्ने वा धातुबाट निर्मित १०८ वटा राहुयन्त्र नागपञ्चमीका दिन बग्दो पानीमा बगाउने वा कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
शङ्खचूड कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु तेस्रो भावमा र राहु नवम भावमा रहेर ती दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भए शङ्खचूड नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। जातकले भाग्यको साथ पाउँदैन । पितृवियोग सहनु पर्छ वा पिताको सान्निध्य पाउन्न । राज्यपक्षबाट अनावश्यक दु:ख पाउने स्थिति हुन्छ । अति परिश्रम गरी सुख सुविधा त जसैतसै जुटछ तर त्यसको भोग गर्न पाउँदैन । पिता, परिवारका बृद्ध सदस्य र राज्यपक्षबाट मतभेद भनले उसले विविध समस्या र तनावले घेरािएर बस्नुपर्छ र उसमा वैराग्यका भावनाहरू सञ्चरण हुन थाल्छन्। हुन त यस योगमा जन्मिने जातक दिर्घायु, साहसी, यशस्वी र धनधान्यबाट परिपूर्ण हुन्छ। दाम्पत्य सुख अतीव अनुकूल रहन्छ। सर्वत्र विजय र सम्मान प्राप्त हुन्छ। तर यस जातकको चित संधै अस्थिर रहन्छ।
राहु र केतुका बीज मंत्रहरुको जाप गर्नुपर्छ। महामृत्युञ्जय कवचको नित्य पाठ गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन शिवलिङ्गमा बेलपत्र अर्पित गर्नुपर्छ। चांदी वा अष्टधातुको नागाकृति औंठी बनाएर ज्योतिषीको सल्लाहबमोजिम हातको औंलामा धारण गर्नुपर्छ। घरको मूल दैलोमा विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा गर्न लगाई स्वस्तिक यन्त्र झुन्ड्याउने वा कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा नागपञ्चमीका दिन प्रतिवर्ष व्रत गर्ने, यथोचित दानदक्षिणा गर्ने र नागलाई दूध चढाउने वा शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्ने वा १०८ वटा कोइलाका टुक्रा नागपञ्चमीका दिन बग्दो पानीमा बगाउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी भन।
घातक कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु चतुर्थ स्थानमा र राहु दशम स्थानमा रहेर ती दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भए घातक नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। जातकले व्यापार व्यवसायमा अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नु पर्छ । हेर्दा व्यापार व्यवसायबाट सफलता र लाभको स्थिति त देखनिछ तर प्रत्यक्षत: घाटा नै हुन्छ । पितृवियोग सहनु पर्छ वा पिताको सान्निध्य पाउन्न । धर्म र ईश्वरप्रतिको विश्वास क्रमश: हट्दै जान्छ । उसमा वैराग्यको भावना सञ्चरण हुन थाल्छ । पदप्रतिष्ठा र कर्मवृद्धिका लागि उसले प्रशस्त सङ्घर्ष गर्छ र केही लाभ पनि हुन्छ तर सारांशमा उसले वैराग्यपूर्ण जीवन बाँच्नु पर्ने हुन्छ । यदि शनि अनुकूल स्थानमा बसेको छ भने यस योगमा जन्म लिने जातक परिश्रमी, धनसञ्चयी तथा सुखी हुने गर्छ। शनिको अनुकुलतामा उपचार र प्रयोग गर्न जानेमा यो राजयोग सरहको योग हो। यस्तो अवसरमा जन्म लिने जातकले मनोवाञ्छित सफलताहरू प्राप्त गर्नाक साथै राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्न पनि सक्दछ। तर जातकले प्रायशः आफ्नो जन्मभूमिभन्दा टाढा रहँदा मात्र राम्रो उन्नति गर्न सक्छ। माताको स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन्छ। सबै ऐश्वर्य हुँदाहुँदै पनि जातकले आँफू स्वयंले भने सुख प्राप्त सक्दैन।
प्रत्येक मङ्गलबारको व्रत गर्नुपर्छ र १०८ पल्ट हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुपर्छ अथवा दिनैपिच्छे हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुपर्छ तथा प्रत्येक मङ्गलबारको व्रत लिनुपर्छ र हनुमानलाई चमेलीको तेल अर्पण गर्नुपर्छ। बुनियाको लड्डूको भोग लगाउनु पर्छ। अर्को उपायमा एक वर्षसम्म गणपति अथर्वशीर्षको दिनहुँ पाठ गर्नुपर्छ। शनिवारका दिन व्रत लिँदा पनि हुन्छ र लहसुनियां(वैदूर्यमणि), फलाम, तिल, सप्तधान्य, तेल, कालो वस्त्र, सुकेको नरिवल आदिलाई दानका रूपमा गरिबगुरुबालाई वा खाँचो हुने ब्राह्मणलाई प्रदान गर्नु पर्छ। मंगलवारका दिन बांम्दरलाई केरा खुवाउनु पर्छ र बग्दो पानीमा मुसुरोको दाल ७०० ग्रामका दरले प्रत्येक शनिबार सात पल्ट प्रवाहित गर्नुपर्छ। भगवान शिवको घरैमा प्रतिमा स्थापना गरी वा चित्र बनाई श्रद्धाभक्तिपूर्वक महामृत्युञ्जय वा ॐ नम: शिवाय मन्त्रको प्रतिदिन जाप वा धातु वा माटाका १०८ वटा सर्प बनाएर नागपञ्चमीका दिन विधिपूर्वक बग्दो पानीमा बगाउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
विषधर कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु पचंम स्थानमा र राहु एघारौं भावमा रहेर ती दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भए विषधर नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। यस योगमा उत्पन्न जातकको ज्येष्ठ सन्तानलाई कष्ट हुन्छ। जातकले आफ्ना दाजुभाइसित झगडा गर्छ। आर्थिक रूपमा प्रशस्त हानि ब्यहोर्नु पर्छ । आँखाको समस्या वा अनिद्रा, हृदयरोग र गुदासम्बन्धी रोगले ग्रस्त हुनपुग्छ । सन्ततिको अभाव वा सन्ततिको बाधाले उसको जीवनलाई निराश बनाउँछ । उसले सामाजिक सम्मान र मानप्रतिष्ठा तथा धनवैभव त प्रशस्त कमाउँछ तर आफूले गरेका दुष्कर्मका फलस्वरूप जातकले मानप्रतिष्ठा पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ । उसको जीवनको अन्त्य रहस्यमय ढङ्गले हुन्छ । तर शनिश्चर अनुकुल स्थानमा रहेमा यस योगमा उत्पन्न जातकले २४ वर्षको उमेरपछि सफलता प्राप्त गर्दछ। त्यसपछिको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो हुन्छ । एघारौं भावमा राहुले सदैव अनुकूल फल प्रदान गर्दछ। उचित तथा अनुचित दुइटै तरिका अपनाएर धनको प्राप्ति हुन्छ। दाम्पत्य सुख अनुकूल हुन्छ। संतान सुखको कुनै कमी हुँदैन ।
घिउको दियो बालेर दुर्गा कवच र सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्छ। देवदारू(लेकाली सल्लो)को बोक्रो, सरस्युँ तथा काँचो फलाम - यी तीन चिजलाई पानीमा उमालेर त्यस पानीलाई मनतातो बनाई ४१ दिनसम्म प्रत्येक दिन स्नान गर्नुपर्छ। कम्तीमा सोह्रवटा सोमवारसम्म प्रत्येक सोमबार भगवान शङ्करलाई ॐ हर हर महादेव भन्दै दहीले अभिषेक गर्नुपर्छ। कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा राहु र केतुको मन्त्रलाई प्रतिदिन पाठ गर्ने तथा दुबै ग्रहको दानादि गर्ने वा राहु र केतुसँग सम्बन्धित दानादि सङ्कलन गरी ब्राह्राणलाई दान गर्ने वा गरिबगुरुवालाई प्रदान गर्ने वा धातु वा माटाका १०८ वटा सर्प बनाएर नागपञ्चमीका दिन विधिपूर्वक बग्दो पानीमा सेलाउने वा लगातार ११ वटा शनिबार पिपल र शिवलिङ्गमा जल चढाउने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
शेषनाग कालसर्प योग[सम्पादन गर्ने]
केतु छैठौं भावमा र राहु बाह्रौं घरमा रहेर ती दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भए शेषनाग नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। जातकलाई सधैं अपरिचित शत्रुको डर हुन्छ । विनाकारण झैझमेला वा मुद्दामामिलामा फँस्नु पर्छ । नोकरी वा व्यवसायमा स्थिरता हुँदैन । घटुवा र असफलता भइरहन्छ । उसले दुर्गमस्थानमा बसाइँ सर्नुपर्ने वा सरुवा भइ जानुपर्ने हुन्छ । राज्यपक्षबाट अनावश्यक दु:ख पाउने र बन्धनको स्थिति पनि आउँछ । त्यस्तै चोटपटकबाट अङ्गभङ्गको भय पनि हुन्छ । सन्तति निरोगी, बलिया र दीर्घायु नै हुन्छन् तर ससुराली पक्षको खटपटले दाम्पत्य जीवनमा असर पर्न सक्छ र दाम्पत्य जीवनमा थोरै पनि सुखको अनुभूति हुन पाउँदैन । मावलीको साथ सहयोग प्राप्त हुँदैन। शनिको अनुकूलतामा उसले कडा परिश्रमपछि आफ्नो मिहिनेत र सुझबुझका बलमा मात्र सफलता हासिल गर्दछ। तर जातकले आफ्नो आचरणलाई संयमित राख्नु अत्यावश्यक छ नत्र अपयशको भागी हुनुपर्छ । यद्यपि मृत्युपछि उसले ठूलो प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ।
कम्तीमा एघार हप्ता प्रत्येक बिहीबार कालो र सेतो तिल बराबर मिसाई बग्दो जलप्रवाहमा सेलाउनु पर्छ । भगवान् विष्णुको मन्दिरमा एक दर्जनको सङ्ख्यामा केरा चढाउनु पर्छ । कुनै शुभ मुहूर्तमा ॐ नमो भगवते वासुदेवायमन्त्रको ११ माला जाप गरेर भगवान् विष्णुको प्रतिमा वा विग्रहमा गाईको दूधले अभिषेक गर्नुपर्छ र तुलसीपत्र आदि सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित गर्नुपर्छ। साथै १२ को सङ्ल्ह्यासंग मिल्दो परिमाणमा सुन, चाँदी वा पित्तलबाट निर्मित शेषनागको प्रतिमालाई विधिवत् प्रतिष्ठा गरी विष्णु भगवानको मन्दिरमा अर्पण गर्नुपर्छ। श्रीमद्भागवत महापुराण अन्तर्गतको नारायण कवचको १०८ आवृत्ति पाठ गर्नु वा गराउनु पर्छ। बिहीबारका दिन भगवान् नारयणको प्रतिमामा पहेंला रङका खाद्यान्न र चिजबीज अर्पण गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त आफ्नो लग्न-अनुकूल हुने गरी रत्न धारण गर्ने वा कालसर्प योग शान्ति यन्त्र घरमा स्थापना गरेर त्यसका सम्मुखमा प्रतिदिन शान्ति पाठ गर्ने वा प्रत्येक पञ्चमीका दिन व्रत गर्ने, यथोचित दानदक्षिणा गर्ने र नागपञ्चमीमा नागलाई दूध चढाउने वा प्रतिवर्ष अक्षय तृतीयामा नरायणबली गर्ने वा राहु र केतुको मन्त्रलाई प्रतिदिन पाठ गर्ने तथा दुबै ग्रहको दानादि गर्ने। राहु र केतुसँग सम्बन्धित दानादि सङ्कलन गरी ब्राह्राणलाई दान गर्ने वा गरिबगुरुवालाई प्रदान गर्ने वा विधिपूर्वक कालसर्प योग शान्ति कर्म सम्पादन गर्ने वा सामूहिक पूजामा सहभागी हुने।
लग्नबमोजिम कालसर्प योगको फल[सम्पादन गर्ने]
मेष र वृश्चिक लग्न
यी दुई लग्नको मालिक मङ्गल ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकले कार्यक्षेत्रमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्दैन । उसको व्यवसायिक क्षेत्र चौपट हुन्छ । नोकरी र व्यवसाय आदिमा अनेक किसिमका आरोहअवरोह भैरहन्छन् । उत्तरोत्तर सङ्घर्ष व्यहोर्नु पर्ने भएकाले व्यक्तिको आत्मविश्वास क्षीण हुँदै जान्छ । उसले जीवनभरि गाँसबास जुटाउन नै लागी पर्नु पर्ने हुन्छ । असन्तुष्टि र तनावको स्वतः सृष्टि हुन्छ । समग्रमा व्यक्ति अशान्त र निराश हुने गर्दछ । उसको अनुहारमा हरहमेशा निराशा मात्र देखा पर्दछ । यस्ता व्यक्तिले आफ्ना चारैतिर अन्धकारै अन्धकार मात्र देख्दछन् ।
वृष र तुला लग्न
यी दुई लग्नको मालिक शुक्र ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातक रोजगारीका क्षेत्रमा प्रायशः चिन्तित हुने गर्दछन् । आफूँसँग भएको वृत्ति गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता उसको मुख्य विषय हुने गर्दछ । यस भयका कारण उसको जीवनडुङ्गा हल्लिएको अनुभूति गर्दछ । यस्ता जातकलाई म आफैं सक्षम छु र मेरा लक्ष्यमा पुग्न म समर्थ छु भन्ने कुरामा पटक्कै आत्मविश्वास हुँदैन । लक्ष्यको नजिकै पुगेर पनि उसले कतिपय पटक कार्यक्षेत्र फेर्न सक्छ । यसै कारणले अशान्त र तनावग्रस्त भई ऊ पुनः नयाँ काम थाल्ने निधो गर्न पुग्छ । परिणामतः ऊ आत्मघाती हुन बेर लगाउँदैन ।
मिथुन र कन्या लग्न
यी दुई लग्नको मालिक बुध ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल गर्ने सपना भने अवश्य देख्दछ तर उसले सफलता कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन । अझ यस्ता व्यक्तिले स्टिल, फर्निचर वा मेसेनरी उद्योगधन्दा गरेको छ भने त तनावग्रस्त जिन्दगी त गुजार्नु पर्छ नै उसलाई गाँसबासको खर्च जुटाउन पनि धौधौ हुन्छ । त्यस्तै ऊ खरिदबिक्री, कमिसन वा दलालीको क्षेत्रमा संलग्न छ भने पटकपटक मिहिनेत गरेर कमाएको रकम घाटा परेर एकै पटकमा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । यस योगमा जन्म लिने जातकहरू कागत, कपडा, अन्नपात, किराना, गृहोपयोगी सामग्री, होटल व्यवसाय आदिका व्यापारिक क्षेत्रमा प्रायशः सफल भएका देखिन्छन् । आँफूभन्दा ज्येष्ठ र वरिष्ठहरूसँग टक्करको स्थिति भैरहन्छ, उनीहरूसँग रिसराग बढ्ने र झगडा हुने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ । फलतः ज्येष्ठ र वरिष्ठहरूको श्राप र चित्त दुःखाइले समेत उसले अनेक किसिमका क्षति र कष्ट व्यहोर्नु पर्छ ।
यस लग्नको मालिक चन्द्रमा ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकको स्थिरतामा कमी देखिन्छ । उसले न कुनै नोकरी गरेर नै आफ्नो जीविका चलाउन सक्दछ, न कुनै व्यवसायमा आबद्ध भएर । ऊ एकै पटक धेरै वटा काममा हात हाल्न पुग्छ तर त्यसलाई परिणाममुखी तुल्याउन सक्दैन । अन्ततः ऊ सबै क्षेत्रमा असफल हुन्छ । यस योगमा जन्मने जातकहरू चिकित्सक, वकिल, ज्योतिषी, शिक्षक तथा कलाकार जस्ता स्वतन्त्र कार्यक्षेत्रमा विशेषज्ञ भएर सफल हुने गर्दछन् । यिनीहरू शारीरिक रूपले अस्वस्थ र परिवारसँग असन्तुष्ट हुने गर्दछन् । चतुर्याइँ, चलाकी र चङ्खपनले अवसरमुखी भई यिनीहरूले आफ्नो आवरण फेर्ने गर्दछन् । यस्ता जातकले चौतर्फी उन्नति त गर्दछन् तर त्यसलाई स्थिर तुल्याउन दानपुण्य गर्नु अनिवार्य छ ।
यस लग्नको मालिक सूर्य ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकले आफ्नो आजीविका र परिवारको भरणपोषणमा सदैव चिन्तित हुनुपर्दछ । उसको व्यवसायमा पटक पटक तीव्र उन्नति त हुन्छ तर एकै पटकको मन्दीले उसको सम्पूर्ण आम्दानी चकनाचुर हुन पुग्छ । उसको पुँजीगत सम्पत्ति सुस्त गतिमा वृद्धि भएको त देखिन्छ तर एउटै झट्कामा सर्वस्व नाश हुन्छ । यस लग्नमा जन्म लिने जातक अर्काको अधीनमा रहन चाहँदैन, तर परिस्थितिवश विवश भएर उसले पराधीनता स्वीकार गर्नु पर्छ । परिवारजनलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राख्नु यिनीहरूको विशेषता हो ।
धनु र मीन लग्न
यी दुई लग्नको मालिक बृहस्पति ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकले पराधीनमा रहेर गर्नुपर्ने काम नोकरी आदिमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । विपरीत लिङ्गीको सहयोगले स्वतन्त्र कार्यक्षेत्रमा भने ऊ सफल हुन्छ । उसको जीवन–साथीसितको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुँदैन । उसले दलाली, कमिसन एजेन्सी, कन्सलटेन्सी एवं राजनीति आदि क्षेत्रमा मान र यश प्राप्त गर्दछ । कालसर्प समेतको यस लग्नमा जन्म लिने जातकले समाजमा प्रसिद्धि प्राप्त त गर्दछ तर उसको अन्तर्मुखी स्वभावका कारण धनको अभावको अनुभूति भने भइरहन्छ । कमाएको धन पनि उपयोग गर्न पाउँदैन । पारिवारिक जीवन असाध्यै सङ्घर्षमय हुन्छ । छातीमाथि गह्रुङ्गो भारी बोकेर हाँसेर हिंड्नु पर्ने अवस्थामा गुज्रान गर्नुपर्छ । ऊ परोपकार गर्न तल्लीन हुन्छ तर यसो गर्दा पनि अपयश र कष्ट व्यहोर्नु पर्छ ।
मकर र कुम्भ लग्न
यी दुई लग्नको मालिक शनिश्चर ग्रह हो । यस लग्नमा जन्म भई कालसर्प योगको सिर्जना भएको छ भने जातकले परदेशमा गुज्रान गर्नुपर्छ । उसले आफ्नो थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइ सर्दा मात्र सफलता आर्जन गर्न सक्दछ । ऊ स्त्रीपुत्रादिबाट सन्तुष्ट र तृप्त हुँदैन । उसले पैतृक सम्पत्तिलाई समेत सदुपयोग गर्न सक्दैन । हुन त यस योगमा जन्मिने जातकले आफूलाई आवश्यक धन आफैं आर्जन गर्दछन् तर त्यस धनबाट न त ऊ आँफू सन्तुष्ट हुन्छ, न स्त्रीपुत्रादि परिवारजन नै । खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, एसिड, कोइला, औषधी, रासायनिक पदार्थ आदिको कारोबारमा व्यापार गरी वा त्यस क्षेत्रमा नोकरी गरी यस योगमा उत्पन्न हुने व्यक्तिले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छन् । तर यदाकदा देखिने आर्थिक सङ्कटले कमाएको सारा सम्पत्ति एकै चोटि स्वाहा हुने गर्दछ । सेयरको कारोबार, सट्टापट्टा, चिठ्ठा आदिबाट पनि उसलाई लाभ हुन्छ ।
समग्र उपाय[सम्पादन गर्ने]
यदि हजुरले सपनामा सर्प देख्नुहुन्छ वा प्रत्येक समय तनाव र असमंजसपूर्ण अवस्थामा रहनुहुन्छ भने हुनसक्छ तपाईँको कुंडलीमा समेत कालसर्पको प्रभाव छ । ज्योतिषशास्त्र-अनुसार जुन व्यक्तिको कुंडलीमा कालसर्प योग हुने गर्दछ, त्यसले जीवनभरि कतिपय कष्ट र कठिनाइ ब्यहोर्नु पर्दछ । उसले कतिचोटि त यतिसम्म तनाव अनुभव गर्दछ कि उसको मस्तिष्कमा आत्महत्यासम्मका विचार उद्भव हुन थाल्छ । यस योगको शांति गर्न सकिन्छ । साह्रै थोरै व्यक्तिहरू यस योगबाट जोगिएका हुन्छन् । यो योग अधिकतम व्यक्तिको कुंडलीमा कुनै न कुनै रूपमा अवस्थित हुन्छ ।
जन्मकुण्डलीको निर्माण नभएका तर सर्पको बाधा भइरहने वा सपनामा किराफट्याङ्ग्रा तथा सर्पादि सरिसृप जीव देख्ने व्यक्तिले वा दाम्पत्य जीवनमा कलह, बिछोड र असन्तुष्टि हुने दम्पतिले नागपञ्चमीका दिन यसको समग्र निवारण यसरी गर्न सक्दछन् :-
१ - त्रिपिण्डी श्राद्ध : पितृहरु असन्तुष्ट हुँदा यो योग हुने गर्छ, अतः नजिकको तीर्थस्थल (विष्णुपादुका, गोकर्ण, गया)मा गई विधिविधान पूर्वक त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्ने, तर मातापिता हुनेले यो कर्म घरका श्राद्धाधिकारप्राप्त सदस्यहरूबाट मात्र सम्पन्न गर्नसक्नु हुनेछ ।
२ - मृत्युञ्जय जाप : कम्तीमा २१००० पटक महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप आफैं गर्ने वा ब्राह्मणद्वारा गराउने ।
३ - नागपूजा : नागपञ्चमीको दिन विधिवत् नागको पूजा गरी धातुनिर्मित नागको प्रतिमा बनाई ब्राह्मणलाई दान गरी, शिवालयमा चढाएर वा नदीमा प्रवाहित गरे कालसर्प योग निवारण यन्त्र धारण गरेपछि मात्र यो योग शान्त हुन्छ ।
४ - यदि कुंडलीमा कालसर्प दोष छ भने पीपलको बोटको एक वर्षभित्र २८००० पटक परिक्रमा गर्नुपर्दछ ।
५ - शिवलिंगमा कुनै धातुको नाग बनाई विधिपूर्वक पूजनप्रतिष्ठा गरी ब्रह्ममुहूर्तमा चढाउनुपर्छ । चांदीका नाग-नागिनी बनाएर नदीमा बगाउनुपर्छ ।
६ - शिव उपासना लघु रुद्रको अनुष्ठान गर्नुपर्छ ।
७ - बुधवार वा शनिवारका दिन भिखारीलाई कंबल, कालोदाल, मूंग आदि दान गर्नुपर्छ ।
८ - एउटा तरबूजालाई प्रत्येक शनिबार पानीको स्रोतछेउमा बेस्सरी पछार्नु पर्दछ ।
९ - शनिवारका दिन कुकुरलाई खाद्यसामग्री अर्पण गर्नुपर्दछ ।
१० - नवनाग स्तोत्रको विधिविधानपूर्वक पाठ गर्नुपर्दछ ।
कालसर्पयोगको घेराभित्र रहेका शुभाशुभ ग्रहहरूका फलमा छाया पारिदिने हुनाले कालसर्प योग भएको व्यक्तिले प्रशस्त मौका, अवसर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उल्लेख गर्न योग्य कुनै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अस्तव्यस्त जिन्दगी, निरुत्तरदायी व्यवहार, दाम्पत्य जीवनमा किचलो, सन्ततिसुखको अभाव, दिमाग र क्षमता हुँदाहुँदै अध्ययन-अध्यापनको क्षेत्रमा कमजोरी आदि यस योगका सामान्य लक्षण हुन् ।तर सबै कालसर्प योग खराब हुँदैनन्, २५ प्रतिशत कालसर्प योग असाध्यै राम्रा मानिन्छन्, त्यसैले विज्ञ ज्यौतिषीको सल्लाह प्राप्त गरी यसको विधिवत् शान्ति गर्नु पर्दछ । स्मरण रहोस् शुभ योगको समेत समुचित उपचारबाटमात्र शुभ्यफाप्य हुन्छ नि !
↑ वृहत्संहिता, राहुचाराध्याय ३।३
↑ त्रिकाल जन्मपत्रिका
↑ डा राधाकृष्ण श्रीमाली, कालसर्प योग, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कालसर्प_योग&oldid=691923" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:४१, ६ डिसेम्बर २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।